Netiwọki ASELSAN nyere nkwado nke onyinye eji eme ihe na NATO | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraNetinyere ASELSAN Network Nkwado Talent ejiri ya na Omume NATO
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Isi akụkọ, agbachitere, Turkey
Ejiri aselsan network kwadoro ọrụ a na omume NATO
Ọrụ 'Network akwado Talent' nke ASELSAN rụpụtara gosipụtara nwamba ya site na ngwa ọgụ nke EU EURASIAN STAR'19.
Emere ihe omume EURASIAN STAR (EAST) 2019 site na ntinye nke ndị ọrụ 3 sitere na isi iri na itoolu, ụlọ ọrụ mba na otu mba ụwa na Istanbul, yana NATO Command na Force Structure.
Iji mepụta ọnọdụ aghụghọ ma gosipụta ọnọdụ dị ugbu a n'oge mmemme EAST-2019, a na-eji ngwanrọ Battalion Command Control Sistem (TÜKKS / TACCIS) rụpụtara n'okpuru oru ngo a na-enyere aka na Network (ADY) nke ọma.
Na 3rd Corps Command, nke bụ isi obodo dị iche iche, sọftụwịa TÜKKS / TACCIS na Bekee, ya na uskpụrụ Status mepụtara maka ụkpụrụ nnọchi anya NATO, mpaghara arụ ọrụ na map ọnụọgụ ọnụọgụ sitere na sava NATO Map, mgbanwe nke ọnọdụ na njikwa akara. ọrụ dịka nsuso, enyi na enyi ọgụ ọgụ (MIT) na ịnyefe ọnọdụ dị ugbu a na NATO Common Ope Picture (NCOP).
N'ime ogo ADY Project, EAST-2019 bidoro na Septemba 30, 2019 na ntinye nke ngwanrọ TÜKKS / TACCIS. Enyere nkwado ndị ọrụ siri ike maka nrụnye, usoro ọzụzụ na onye ọrụ, ntinye data tupu mmega ahụ na usoro mmezu nke mmega ahụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-eme nzaghachi n'aka ndị na-azụ ọzụzụ, ndị na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ma ọrụ dị mkpa iji mezue mmega ahụ nke ọma.
Emezuru mmemme EAST-2019 nke ọma na ngwanrọ TÜKKS / TACCIS maka imezu mkpa nke ndị agha nke ndị agha Turkey ọnwa iri tupu nnyefe Project ADY.
Nzọụkwụ ọzọ na usoro nke iburu ọrụ NATO 2021 (NRF21), nke dị mkpa maka mba anyị, ka ejiri mmezu nke mmemme EAST-2019 mezue.
Usoro Asambodo NATO
STEADFAST COBALT 2020 (STC2020) ka usoro asambodo NATO na March-Mee 020, CWIX-2020 (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) and STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 na November-December 2020 JA2020) ga-aga n’ihu n’izu ike.
N'ihi ihe ịga nke ọma a na-enweta na mmega ahụ, ekwuputala na ndị ọrụ nke ADY Project na ndị mmekọ ụdị nzụkọ sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche gbakọtara ọnụ na mmemme emume a na İvedik Technopark campus na ntinye aka nke Defence System Teknụzụ (SST) Onye isi ala na osote General Manager Mustafa Kaval na ndị njikwa.
Netiwu Agbara Nkwado Na Nweta (ADY) MIP
N'ime oke nke oru ndị enyere n'iwu nke Land Force Command, emepụtara ihe mgbochi IT n'ime afọ 15 gara aga n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ NATO na Havelsan enyerela mmezi ha.
Mmechi nke ihe owuwu ndị a na ojiji ha maka onyinye netwọlụ na-esonye na Nlekọta a na-enyere aka na Network (ADY). Dị ka akụkụ nke Network Mgbakọ Nkwado ikike (ADY) MIP Compliance, Havelsan ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na atụmatụ na ntinye nke akụrụngwa njikọ nke Land Forces Command, nke emere n'oge 2001-2012, na mmekorita nke sistemụ ozi nke Land Forces Command na gburugburu mba na mba. (Isi mmalite: DefenceTurk)
Atụmatụ Tram na-akwado EU maka Cyprus
Ụgbọ njem na ọrụ nhazi nke Helicopter malitere na Alanya Cable Car Construction
A ga-ekpughe ihe ndị a na-akwado ụgbọ njem na Sirkeci Train Station
Helicopta nyere aka na ntinye ihe ntinye na Uludağ (Ụlọ Osisi Foto)
3. Metro na ọdụ ụgbọ elu na 3. ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ akwa-enyere aka
Iwu ọhụrụ site na UKOME na-akwado mmepụta ụlọ nke Ahịa Yellow Tax
Nato Pipeline Displament Dispoment (BHRS III, Ase (East Line)…
NATO Pipe na Bursaray Light Rail System Raage 3 (East Line) utezọ…
Ndị ọrụ ọsụ ụzọ Eurasia na-agafe agagharị n'ụwa niile
Na-agbapụta ụgbọ mmiri na ochelift na Yıldız Mountain
Ọzụzụ Ọkụ na Mmega Ahụ na Çankırı Scissor Factory
Istanbul 5 ga-emepe afọ ọ bụla n'afọ
Sanliurfa kacha ọhụrụ 4 Afọ na-agafe na njem
Usoro nhazi okporo ụzọ nke Nevşehir
Usoro Samsine Sarp Railway Project Çağ Atlatır
Onyinye mmemme oriri maka ụmụ amaala karịrị afọ 60 si Izmir Metropolitan
D Environment, Accident and Emergency Application "e mere na TÜDEMSAŞ
Oge ohuru amalite na njem nke Bursa RayHaber Anyị nọ ebe ahụ (Foto…
Izbanda Fire Drill (Photo Gallery)
TCDD 3. Ọkụ Ọzụzụ Ọkụ na Mpaghara